Kodzero yekamu B1 - chii? Ndeupi musiyano kubva muchikamu B? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Kuvapo kwechikwata B kunopa kodzero yekufambisa motokari dzine mashoma anogamuchirwa asingadariki 3500 kg, uye nhamba yezvigaro umo, kunze kwechigaro chekutya, haisi kudarika masere. Kuvapo kweboka reB1 kunopa kodzero yekugadzirisa tricycle uye quadricycles. Zvinyorwa zvitanhatu zvinosanganisira motokari dzamakumbo mana, iyo inotunurwa yakawanda iyo haina kupfuura 400 kg. Tricycles inosanganisira motokari mitatu, iyo injini inokwanisa kupfuura 50 cc.
Kodzero dzeboka B dzakasiyana zvakasiyana nekodzero dzeboka B1. Kusiyana uku mune pfungwa dzinotevera: kodzero dzichakupa kodzero yekudzidzira mutemo wemotokari inorema kusvika kutatu nehafu, uyewo kana pasina zvigaro zvisere (kutyaira hakubvumirwi munyaya ino); Asi kodzero dzeB1 dzichakubvumira kudzora motokari dzakadai sematricycles, quadricycles (nokuda kwavo, masero haasi kupfuura 400 kg, uyewo injini kusvika ku50, ona cubic)
Chikamu B1 hachishande kumota, iyi subcategory inosanganisa zvishoma zvakasiyana nzira yekutakura. Zvinonzi: ATVs uye matatu. Sezvaunonzwisisa kare, quadro inoreva mavhiri mana, asi matiraki anozvitaurira - matatu mavhiri.
Kusiyanisa kwekutakura uku:
kwete zvakanyanya kukurira kupfuura 400kg,
Injini yejinjini kwete kupfuura maC cubes 50.
Iyo B1 yakasiyana neyokuti inobvumira mutyairi kuti atungamirire quad mabhasi, ayo mashoma haadarika 400 kg, pamwe nematricycles, iyo injini yemajini haipfuuri cube 50. ona
Chikamu B ndiko kutonga kwemotokari, kuve wakanyatsojeka, unorema kusvika kumatani mazana matatu uye huwandu hwezvigaro zvine zvigaro zvevatyairi zvinosanganisira kwete kupfuura 3.5.
Pamusana pekuti munguva yemakore maviri nemakumi matanhatu nematanhatu nhamba yezvikamu zvekushandurwa zvakaitwa, ndinofunga kuti mubvunzo uyu unofadza kune vakawanda.
Saka, pasinei nekufananidzwa kwemashoko, izvi zvikamu zvacho zvakanyatsotarisa, sezvo zvinopa kodzero yekufambisa motokari dzakasiyana-siyana dzine zviyero zvakasiyana.
Nekudaro, chikamu B chakanangidzirwa pamotokari isingasviki matatu nehafu matani, uye B1 - patiraki uye ATV.
B uye B1 ndidzo zvikamu zvemitemo yekutyaira uye vanofanirwa kudzidziswa zvakasiyana. Rudzi rwacho runorondedzera mota zvinoenderana nekugadzika zvinoenderana nehunhu hwayo hwekushandisa uye nezvipimo. Kubva gore ra2015, zvikamu izvi zvave nekuchinja kukuru.
Chikamu B - zvinoreva kuti mutyairi anogona kudzora mota, iyo yakawanda isiri kupfuura 3,5 matani. Kufambisa kunogona kuva neyetrailer, asi huwandu hwayo haafanire kupfuura 750 kg.
Kunewo mazvikamu zvekutakura, munyaya iyi tinofarira In1
Zvakanaka, ndiani mudondo, ndiani nemoto ...
Usavhiringidza quadrocycles ne quadrics.
MaATV haisi mota dzemigwagwa yeruzhinji, inogona kushandiswa chete panzvimbo yakaoma. Kuti uve akakodzera kukwira ATV, iwe unofanirwa kuve nechikamu A1.
VVV vanogona kukwira ipapo uye ikoko. Iyi nzira yekufambisa ndeyomutambo B1, pamwe nematricycles, ane 3 mavhiri.
Kana uine chikamu B, B1 inosungirirwa.
Chikamu B chinosanganisira motokari inoshandiswa nejinjini isiri yeikwana 50, uye zviyero pachavo hazvirevi kupfuura matani 3,5 (kana iyo motokari ine taraira, ipapo mhizha pachayo uye trailer haifaniri kudarika chiyero chakarehwa). Uye nhamba yezvigaro mavari haifaniri kudarika masere.
Avo vanofarira kukwira nemhepo, iwo guruva nevhu kumeso kwavo ndiko kufadzwa kweparadhiso uye adrenaline, vanofanirwa kunge vaine rezinesi rekutyaira umo muchikamu B1 chinovhurwa:
Kana munhu achida kutyaira motokari, muimba yekambani yemotokari yaanoda, nemimhanzi uye mhepo yepamhepo, pamwe nemhuri yake yose kana shamwari, boka B rinofanira kunge rakasununguka:
Aya maviri maviri akasiyana kubva kune mumwe mukero B anobvumira mutyairi kuti atakure motokari inofamba inenge yakareba kusvika ku 3,5 tani, asi neboka B 1 mutyairi anogona kungofambisa tricycles ne quad mabhasi, ayo mashoma haafaniri kudarika 400 kilogram uye injini yejini Iva nechinenge 50 cubic centimeters. Saka, usati wasvika kumashure kwegumbo remotokari, iva nechokwadi chokuti une chikamu chakanaka.
Kusiyana kwekodzero yeboka B kubva kuE1:
Chikamu B chinopa kodzero yekufambisa motokari kusvika ku3,5 t, uye nhamba yezvigaro, kuwedzera kune mutyairi, haisi masere masere.
B1 chikwata chinopa kodzero yekudzora quad mabhasi nekurema kusvika ku 400 kg, uye matricycles, nejini injini kusvika ku 50 cubic cm.
Chikamu chekodzero B1 yakasiyana nechechi B chete pakuti inokubvumira kutyaira motokari dzakadai se quad bhasikoro uye tricycle. Panguva imwecheteyo, chiremera chezvikamu izvi chinopa kutyaira aya majaira neuwandu husina kupfuura 400 kilogiramu uye injini yejini inenge iine 50 cubic centimeters.
Panguva iyo, paakawana kodzero dzeboka B dzakakwana-dzose muRussia, B1 chikamu chinoiswa pakarepo mumashini.
Mibvunzo ye21 mu database yakagadzirwa mu 0,652 masekondi.